Zvakazarurwa Chitsauko 17 inotiudza isu maKristu patinotadza
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Zvakazarurwa Chitsauko 17 inotiudza isu maKristu patinotadza
Zvakazarurwa Chitsauko 17 inotiudza isu maKristu patinotadza
Nei rudzi rwevanhu rwuri kuenda kuZuva raMwari Rekutongwa kwevanhu?
Izvi zvinouya nekuda kwekuteerera uye kutevera dzidziso dzisiri muBhaibheri.
Zvakazarurwa chitsauko 17 inotaura nezvekumuka nekupararira kweantikristu, tsime guru rinobuda kukanganisa pakuita zvisina kubva muBhaibheri .
Tinofanira kuziva kuti muvengi ndiyani kuitira kuti tisazobatwe tiri murutava rwake.
Chitsauko ichi chine chokwadi chinorwadza sezvo chichitaura zvizere kuti nei munhu achasangana nekutonga kwaMwarij. Inotsanangura kutadza kwatinosangana nako mazuva ese kwararama kwemakore 2 000, sezvo Satani akashandisa kuita uku kuti anyengere vanhu vazhinji mukati menguva dzemakereke (church ages). Satani chaaifanira kuita chete kuita kuti titende mune zvinhu zvakasiyana nezvakanyorwa muBhaibheri.
Uye kana tisina kumuka zvakazara, kutadza uku kunotitsvairira munguva yeKutambudzika kukuru.
ZVAKAZARURWA 17:1 Zvino mumwe wavatumwa vanomwe, vakanga vane ndiro nomwe, akavuya akataura neni, achiti: Vuya pano ndichakuratidza kutongwa kwemhombwe huru, inogara pamusoro pemvura zhinji;
Ndiro nomwe dzichadururirwa panyika panguva yeKutambudzika kukuru sezvo dzichimiririra kutsamwa kukuru kwaJehova nekuda kwechivi chinova kusatenda, kusatenda zvakanyorwa muBhaibheri . muchisarudza kutenda mune zvimwewo zvisiri muBhaibheri.
Mumwe wevatumwa venguva yekutongwa kwevanhu akauya akaudza Johane zvinhu zvaive zvatadzika zvakaipisisa zvekuti vanhu vaizoenda kunotongwa. Rudzi rwevanhu rwapindana sei nekuipa kwese uku?
Chinhu chikuru chakatsamwisa Mwari zvakanyanyisa ndiye mukadzi.
Mukadzi chaiye here kana kuti chinhu chinofananidzwa nemukadzi?
Agere pamusoro pemvura zhinji. Hakuna munhukadzi angagone izvi, saka chinodaro chiri chiratidzo.
Mukadzi chiratidzo chechii? Kereke.
Iyi ichaputa yakakosha kwazvo sezvo inotaura pamusoro pekutonga kwaMwari pamusoro peChivi. Ndiyani uyo achatongwa?
Tinofanira kuziva. Mukadzi chiratidzo chekereke. Kereke yechokwadi inodaidzwa kuti Mwenga kana mukadzi waKristu.
ZVAKAZARURWA 19:7 Ngatifarei tifarisise, timukudze; nokuti mutambo wekuwana weGwaiana wasvika, mukadzi waro wazvigadzira.
II VAKORINTE 11:2 Nekuti ndine godo pamusoro penyu negodo raMwari; nokuti ndakakuwanisai nemurume mumwe kuti ndikuisei kuna Kristu semhandara yakachena.
3 Asi ndinotya kuti, senyoka yakanyengera Eva namano ayo zvimwe saizvozvo ndangariro dzenyu dzingasvibiswa, dzitsauke pakururama nokuchena kwomoyo kuri kunaKristu.
Asi Johane akaona mukadzi akashata anomiririra kereke yakashata yakan’oreswa nevamwe varume.
Mukadzi akanaka anorarama pachokwadi kumurume wake. Kereke yechokwadi inotenda mune zvakataurwa naJesu chete. Anonzi Shoko raMwari. Saka tinofanira kutenda chete zviri muBhaibheri.
Kereke yakaonekwa naJohane iyi inotenda mune zvinotaurwa nevamwe varume. Zvikurusei, kereke iyi iri kubatana batana nemazano nemifungo yevamwe varume.
Pfungwa dzevanhu imimba dzemweya dzinobereka dzidziso kubva pamazano kana mifungo inoiswa mupfungwa dzedu nevamwe vanhu. Pfungwa dzese dzinozoita kana kuti dzinoumba kutenda kwedu dzinofanira kubva muBhaibheri. Kana vanhu vakaisa mamwe mafungiro matiri anoita kuti tibereke dzidziso dzisingabvi muBhaibheri nekuti hadzina kunyorwa muBhaibheri, ipapo tinenge tisisina kuvimbika kuna Kristu.
ZVAKAZARURWA 17:15 Zvino akati kwandiri: mvura yawavona inogarwa nemhombwe, ndivo vanhu navazhinji namarudzi, nendimi.
Gungwa rinomirira vanhu vazhinji vasina kugadzikika vanokwira nekudzika vachikurudzirwa nekumanikidzwa kunouyiswa nehupenyu, nezvese zvinouya kwekanguvana nezvefashoni asi zvinoshanduka nenguva yazvo. Vanhu vanoshandurwa zviri nyore nemazano kana mifungo inoiswa mavari nevaparidzi vesimba vanogona kutaura paruzhinji. Saka chitsauko chino chinotiratidza zviitiko zvesimba repasi rese rinoda kutonga nyika. Napoleon akaedza kutonga Europe akakundikana. Hitiler akaedza akatadza. Vapambevhu vakaedza kutonga pasi rese vakakundikana. Nei? Hapana pakati pemapato ane simba ese aya aive nechitendero maari. Munhu akaberekwa mukati make muine chikamu chinoda kuzadziswa nezvemweya.
Mafungu akadzama egungwa anomiririra kurudziro yemweya werima wekurudziro yechisatani nemadhimoni unokurudzira mafungiro evanhu zviri nyore wovapa mweya weruzhinji, manzwiro ekuti vanofanira kuva vari muboka uye havafaniri kupikisana neboka iroro, maitiro iwayo anoita kuti tirambe kutsiurwa kana kugadziriswa kunobva kunze kweboka. Asi kana ukatevera kumashure kweboka unozoona kuti huswa hwakasvibira hwese hwadyiwa. Dzidzai kuzvifungira.
Jesu paakabvisa madhimoni aRigioni pamurume aive paGedhara, mweya iyi yakapinda munguruve dzakatizira mugungwa. Izvi zvinotaridza kuti zviri nyore sei kuti mweya yakaipa itizire uye iwane musha “mugungwa” rinomiririra vanhu vazhinji vasina kugadzikika.
Kereke yechokwadi ichave yakazadzwa neMweya mutsvene neruwadzano naJesu Kristu runoita kuti vatende nekutevera Bhaibheri. Rumwe ruzhinji rwese mukereke runenge ruchitsvaga kudakara nezviitiko nekuwonekera 'kwechichechi-chechi'. Tinoda rudzi rwezvitendero zvekutenda mazviri kuitira kuti tibatire Mwari nenzira inotiitira isu. Asi hutungamiriri hwevanhu netsika zvinoit a kuti kereke ikundwe nekurudziro yesimba rechikara riri kusimuka.
Islam ibato rinovhundutsa kereke nekuti rine chinhu charinokoshesa muchitendero chavo, saka chinorarama mumoyo yemaMuslim. Vachifunga kuti vachaenda kudenga, mabhomba ekuzviuraya nekuzvipira kuuraya vanhu anoita mitsetse mukuzvipira kwavo kupinda denga nenzira yekudimbudzira. Izvi zvinoratidza simba rine mafungiro echitendero. Hakuna simba richakwanisa kutonga pasi rese kunze kwekunge rakwanisa kusanganisa zvematongerwo enyika nechitendero.
Hatifaniri kushamiswa nekuzoziva kuti kutadza kunofanira kubva kune vanoenda kukereke. Munhu akaipa pamazuva akararama Jesu aive Judhasi. Aive muteveri waJesu. Muteveri akasarudzwa. Kwete munhu wekunze.
Saka mukadzi mutadzi uyu ikereke yakazara nekutadza kwasimuka kuva nesimba nekurudziro mupasi rese.
ZVAKAZARURWA 17:2 Madzimambo enyika akaita vupombwe nayo, navanogara panyika vakabatwa newaini yehupombwe hwayo.
Madzimambo anomiririra simba munezvematongerwo enyika. Saka kereke iyi ine vanhu vezvematongerwo enyika vazhinji. Vatongi vepasi rino vanotevera sangano iri.
Saka isangano rakakosha kwese kune zvekutongwa kwenyika uye zvechitendero.
Hupombwe hunonzi muchirungu fonikesheni zvinoreva kuti haana kuwanikwa asi achiita zvepabonde. Dai aive akawanikwa Bhaibheri raizoshandisa izwi rekuti upombwe muchirungu riri adhautari. Kereke iyi haisi mudzimai waKristu chero ichizviti mudzimai waKristu.
Vanhu venyama vanonwa waini kuti vafare. Pamweya waini inomiririra kumutswa kwezaruriro. Kunzwisisa chinhu chiri muBhaibheri zvinotipa mufaro. Asi zaruriro dzekereke iyi, kupfurikidza kudhaka, ndedzekutadza nekuti kuita zvebonde munhu asati awanikwa kwakarambwa muBhaibheri. Kuita bonde usina kuroorwa. Saka mukadzi uyu, kereke yakatadza, haisi kuzoroorwa naKristu sezvo iye acharoora mhandara chete. Kereke iyi inopa vanhu chinhu chinovadhaka, asi chiri chinhu chakaipisisa, kungofanana nekuita bonde kunze kwewanano.
MABASA AVAPOSITORA 2:4 Vose vakazadzwa noMweya Mutsvene, vakatanga kutaura nedzimwe ndimi, pavakapiwa napo noMweya kureva.
MABASA AVAAPOSTORA 2:13 Asi vamwe vakaseka vachiti: vaguta waini itsva.
14 Zvino Petro amire nevanegumi nomumwe, akadanidzira, akaparidza kwavari achiti: varume veJudea nemi mose mugere Jerusarema, chinhu ichi ngachizikanwe nemi, muterere mashoko angu.
15 Nekuti ava havana kubatwa, sezvamunofunga imi, zvaichiri nguva yechitanhatu yezuva.
Vadzidzi vaive vakabatwa neMweya Mutsvene zvekuti vaidzedzereka pavaifamba.
Kuneta kukuru kuri matiri vaKristu ndekwekuti vanhu vakangwara vanokwanisa kuva nemazano anofadza anobata pfungwa dzedu. Zvino, setakabatwa, hatikwanisi kufunga nemaGwaro kuitira kuti tigadzirise kukanganisa kwedu.
Hatikwanisi kutora mazano evanhu anofadza aya toita bembera tichidzokera kumaGwaro, saka tinongomabvuma nekuti zvinotiitira uye zvinotifadza.
Chitendero ndepaya patinoudza Mwari kuti tinoda kumunamata nenzira inotifadza isu. Fungai nezveKisimusi (izwi risiri mumaGwaro) 25 Zvita (zuva risiri mumaGwaro) muti wekisimusi (chinhu chinoitwa navahedheni chatisingafaniri kutevedzera zvakataurwa naJeremia).
JEREMIA 10:2 Zvanzi naJEHOVA, regai kudzidza tsika dzamarudzi avanhu, musavhundutswa nezviratidzo zvekudenga; nokuti marudzi avanhu anovhunduswa nazvo.
4 Vanoushongedza nesirveri nendarama, vanourovera nembambo nenyundo, kuti urege kuzungunuka.
Vazivi vekumabvazuva vakapinda mumba kwete muchidyiro, apo Jesu aive mwana muduku kwete rusvava. Uye Maria ega ndiye akataurwa nezvake, kwete Josefa.
MATEO 2:11 Vakapinda mumba, vakawana Mwana naMaria mai vake, vakawira pasi vakamunamata; vakasunungura pfuma yavo, vakamupa zvipo zvendarama, nezvinonhuwira nemura.
Asi isu maKristu takasukurudzwa pfungwa nemifananidzo yemakadhi eKisimusi, vaparidzi vachida kuva nembiri, neuyo mutambo watinoona muna Zvita mega-mega, wekuti hatibvumi kuti vazivi havana kuenda kuchidyiro. Asi pamusoro pazvose ndivo chikonzero nei tichipanana zvipo nevana vedu (nevamwe vanhu vese vatinonzwa kuda kutengera zvipo). Saka Kisimusi yakamonwa nemweya wakasimba, uye isu maHedeni hatiite kunge tinoda kusiyana nechitendero ichi uye kuita kunotipedzera mari uku.
Chipurisita chakazouya mumashure memvura yaNoa kuBabironi chaive chakachenjera kwazvo. Mazano avo akaramba achitifadza. Fungai kuti mangani maKristu nhasi uno vachiri kuverenga nyeredzi dzeZodiac, dzinova chimwe chinhu chehuchenjeri hweBabironi yekare.
Vanodhakwa vanoratidza kutsamwa kwavo pachinzvimbo chekutaura zvinovaka. Kunyangwe Kisimusi isiri chinhu chakakoshesesa parizvino, inoratidza simba rakakurisa riri mukufuririka rinotiita kuti titevere ruzhinji pachinzvimbo chekutevera Shoko. Asi Kisimusi, sezvidhakwa, tinoramba takabatwa neKisimusi.
Asi kune zvinhu zvakakoshesesa zvatinofanira kuziva apo maKristu anoshaiwa nheyo dzeBhaibheri pakutenda kwavo.
Rubhabhatidzo rweMvura runotaurwa nenzira mbiri muBhaibheri. Saka izvi zvinoda kuti tifunge zvakajeka.
MATEO 28:19 Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabapatidze muzita raBaba nereMwanakomana neroMweya Mutsvene.
MABASA AVAAPOSTORA 2:38 Petro akati kwavari: Tendevukai mumwe nemumwe wenyu abapatidzwe nezita raJesu kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene.
Kana maKristu, vakange vasisakwanisi kufunga zvakanaka, havazokwanisi kuona zvakanaka kuti vayananise mavhesi maviri aya uye zviri nyore, uye nekukasikisa, vanoramba rimwechete rawo vachiti rakakanganiswa votenda rimwe racho. Kuti tizive chokwadi, tinoda kuteerera ese. Kuramba gwaro nekuti tinoti rakakanganiswa, zvakaipisisa. Hatingave nechokwadi chakazara kana muine chakakanganiswa muBhaibheri.
Kutaura kuti “Petro akakanganisa saka zviri nani nditevere Jesu” indangariro dzakaipisisa nekuti tinobva tati vapositora vaisaziva kuti vari kuitei.
II TIMOTIO 3:16 Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari runobatsira pakudzidzisa, runokuraira, nokururamisa, nokuranga kuri mukururama.
Jesu paakanamatira vadzidzi vake akati:
JOHANE 17:20 Handinyengetereri ava bedzi, asi naivo vachatendawo kwandiri neShoko ravo.
Tinokwanisa kudzidza nezvaJesu kubva kuvadzidzi vake bedzi.
Kana tikasatenderana nevadzidzi ipapo tisu vanhu vanenge vachitadza, kwete ivo.
Mukati menguva yekereke yekupedzisira yatiri tinofanira kudzokera kudzidziso yeTestamente Itsva yekereke yekutanga.
Saka mubvunzo watinofanira kubvunza ndewekuti “Zita raMwari nderekuti kudii?”
Pachikamu ichi maKristu anotambudzika. Takadzidziswa Tiriniti (izwi risimo muBhaibheri) yaMwari vamwechete muVanhu vatatu (mutsara usimo mumaGwaro). MaRoman Catholic vakaita vakanatsa pfungwa iyi mukati memazana emakore kubva kmakore akapoteredza 250AD kusvika kunana 500 AD.
Isu vapanduki vakapandukira Roma tinongozvitora tisina kana kuzvibvunziridza.
Mukuita uku takarasikirwa neZita raMwari nekuti vanhu vatatu havangave nezita rimwechete. Saka, semaCatholic, takaita mazita ezvinzimbo matatu “Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene” kutsiva zita rimwechete.
Asi Petro anotiudza Zita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. NdiJesu Kristu.
Chinhu chatakakanganisa kwaive kutenda mupfungwa yakaiswa neBabironi yechipegani yetiriniti tikaita pfungwa iyoyo Tiriniti 'yechiKristu'. Kanganwai izwi risiri mumaGwaro Tiriniti murege kuzara kwovuMwari (Mweya waMwari) ugare mumuvuri weMunhu Jesu tova “naJesu Kristu” seZita raMwari remunhu.
VAKOROSE 2:8 Chenjerai kuti murega kutapwa nomunhu novuchenjeri, nokunyengera kusina maturo, achitevera tsika dzavanhu nezvokuvamba zvenyika, asingateveri Kristu.
Huchenjeri hwemaGiriki kuti vatatu-mumwe kana kuti Mwari- mumwe-muVanhu -vatatu. Hapana kumwechete kwekutaura uku kuri mumaGwaro.
MaCatholic akaita Tiriniti isina kunyorwa muBhaibheri. Isu veMasangano akabuda mairi takatambira izvi parizvino tinotevera nzira imwechete yekurwira Tiriniti nemamwe mazano asina kunyorwa muBhaibheri. Saka maCatholic neveMasangano vane kuita kumwechete. Hatifanirwi kutenda mune chimwe chinhu chisina kunyorwa muBhaibheri.
Sevakabatwa newaini, maKristu vanoramba vakabatwa nekutenda kwavo muTiriniti yechiCatholic.
ZVAKAZARURWA 17:3 Ipapo wakandiisa kurenje mumweya, ndikaona mukadzi akatasva chikara chitsvuku, chizere namazita okumhura Mwari, chine misoro minomwe nenyanga gumi.
Chokwadi chinorwadza. Kana uchida kuti Mweya waMwari ukutungamirire, uchava munhu anoshorwa asina mbiri. Renje harina vanhu vazhinji vanogaramo. Kana tikava vanhu vechokwadi mubairo wedu wekutanga kurambwa nevamwe. Asi kana tatova murenje redu tega, Johane akakohwa mubairo wake: akaona chimwe chinhu. Maziso ake emukati kana kuti emweya akazarurwa. Kashoma kuti tikwanise kuona chokwadi tiri muruzhinji nekuti tinobva takoshesa kuda kugamuchirwa neruzhinji uye kuti rwutenderane nesu. Vanoda kufadza ruzhinji rwevanhu havadzidzi chokwadi. Chokwadi hachibvumirani nezvinofungwa neruzhinji saka hatifi takawana chokwadi kusvikira tazvipira kuzvimiririra kubva kuruzhinji. Vanhu vanoda kufadza vanhu havakwanisi kudzidza chokwadi nekukasika. Chokwadi chinorambana nemafungiro eruzhinji saka hatiwani chokwadi kana tisati tazvipira kuva tiri tega.
Chikara isimba. Asi simba rakaipa iri raive nekereke yaive igere pamusoro paro, ichichitonga. Chikara ichi chaive chitsvuku. Urwu ruvara rwechivi asi rwuri zvakare ruvara rwekuratidza kukosha mukereke yeRoman Catholic sezvo maKadhinari avo, vanofambisa zvinhu mukereke vanoshonga zvitsvuku.
ISAYA 1:18 Chivuyai zvino, titaurirane, ndizvo zvinotaura Jehova, kunyangwe zvivi zvenyu zvakaita semucheka mutsvuku, zvichachena sechando
62-1104M MAZITA EKUMHURA MWARI
Zvino, vanogunun'una pamusoro pekuti ndinopikisana nemamwe mapato. Ndiwo mazita ekumhura, vanozvidaidza kuti ,“Makereke aMwari, nemakereke aKristu, nemakereke eMethodist, nemakereke.” ndiwo maroji, kwete makereke.
Kereke imwechete, ndiyo kereke yaIshe Jesu Kristu. Ndeipi? Muviri waJesu Kristu uri kubate basa panyika, kwakaitwa nechero nhengo yemasangano iwaya, anova chikamu chemuviri waKristu. Unofanira kuzvarwa patsva maUri, kwete kupinda maUri.
Asi “azere nemazita ekumhura Mwari,” Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, vese vanozvidaidza kuti “makereke aMwari.” Mazita okumhura! Zvakasiyana kwazvo nekuti “mazita okumhura” nemazita okumhurisa.” vanozvidaidza kuti “Kereke yaMwari,” vozviratidza pamberi penyika; vachipanana makadhi emitambo yemhemberero, kudhakwa, vachienderera mberi vanotevera mitambo yese pazvivhitivhiti, nezvimwe zvese zvakadaro.
Hatina mvumo yekuzvidaidza nemamwe mazita ese kunze kwekuti maKristu.
Kururamisira mamwe masangano ese anodarika 30 000 akasiyana-siyana akanyuka, vanhu vakazviitira mazita asingaperi kuti vazivikanwe. Kuita uku “kwechichechi-chechi” chemasangano kunotiita chikamu chechikara uye “chakazara nemazita”emasangano iwaya anongonyuka.
Mwenga chaiye anotora zita remurume wake, kwete mamwe mazita. Murume wedu anonzi Kristu. Saka maererano nemaGwaro tiri maKristu.
MABASA AVAAPOSTORA 11:26 Zvino akati amuwana, akauya naye Antiokia. Ipapo vakaungana nekereke gore rese, vakadzidzisa vanhu vazhinji-zhinji; paAntiokia vadzidzi vakatanga kunzi vaKristu.
MABASA AVAAPOSTORA 26:28 Agripa akati kuna Pauro: Unenge unoda kundiita muKristu nenguva duku.
1 PETRO 4: 16 Asi kana munhu achitambudzika nekuda kwekuti muKristu, ngaarege kunyadziswa asi ngaakudze Mwari nezita iri.
Kana tichida chokwadi tinofanira kuenda, saJohane, murenje remweya kune vanhu vashoma kuti tibve pamifungo nemazano uye tsika dzevanhu.
Dambudziko riripo pamotto inoti “kuenda neruzhinji” ndeyekuti rwendo rwacho rwunongonanga kumawere. Chokwadi hachitiiti kuti tive nembiri.
Mukadzi uyu, kereke yeCatholic, yakatasva, saka ndiyo iri kutonga, chikara kana kuti simba rinoparadza rine kereke yeCatholic. Simba iri rakaitwa nekuedzwa nekutadza mukati memakore angasvike 2 000 apo Catholic inotarisa kuzviitiko zvepasi rino kana kuti inotora mukana wekushandisa shanduko dzezvematongerwo enyika kana muzvitendero kuti ikure. Kuda kwake simba kwaita kuti akwanise kuvaka bato rekereke riri pasi rese richamutendera kuti rimwe zuva rimwechete richauya agotonga pasi rese nesimba rake. Ndiye ega munhu akatasva chikara. Hakuna mumwe munhu anokwanisa kuchikunda kana kuchiudza zvekuita kunze kwake.
Isu vemasangano tinofadzwa nezvakakwaniswa kuitwa neCatholic, uye inokwanisa kusimbisa kurarama kwebato rechitendero rinoyevedza pasi rese iri, zvekuti nesuwo tave kuedza zvine simba kuvaka mufananidzo wechikara. Uku kuita kwemafambisirwo eMasangano akabuda muCatholic pasi rese nekubata kwezvematongerwo enyika kunokwanisa kukwikwidza kereke yeCatholic. SemaCatholic, isu veMasangano hatichagayi zvakanyanya kuti tinofanira kurarama nemaGwaro bedzi chero zviite sei. Zano redu rekuva makereke akabudirira riri pakuti taita mari yakawanda sei uye vanhu vaungana vawandisa zvakadii. Mumashure mezvose, mukuedza kwedu kuteedzera kana kuita semaCatholic anodarika 1 biriyoni tinofanirawo kuita masangano makuru ane vanhu vane mari zhinji.
Simba rezvemweya rakasimba ndiwo mweya unotiita kuti tide kunamata kana kutevedzera kana kuzviita seumwe munhu anorarama. Tinotaura “nezvevanhu vezvemafirimu” uye “vanhu vezvemitambo.” Tinovasimudzira nekuvayemura. Saka kereke inozoita vatungamiriri vakakodzera uye vakasimudzirwa. Maria anosimudzirwa nekunamatwa nemaCatholic. Vakawanda vanotenda kuti anokwanisa kuita kuti Jesu avaponese. Vanhu vanoshandiswa nemweya wekuda kusimudzira vamwe vanhu vanorarama. Hatikwanisi kudaidza mutungamiriri wedu wekukereke kuti “Joe” kana kuti “Francis”. Tinotozviita kuti titi; “Pasita Joe” kana kuti “Pope Francis”. Izvi hazvina kubvira zvaitwa munguva yekereke yemazuva eTestamente Itsva. Izwi rekuti “Pope” harisi muBhaibheri. Izwi rekuti “pasita” mufudzi rakangotaurwa kamwechete muTestamente Itsva uye riri pahushumiri hwechina pahushumiri hushanu hwakataurwa.
VAEFESO 4:11 Zvino wakapa vamwe kuti vave vaapositora, vamwe vaporofita, vamwe vaEvhangeri, vamwe vafudzi navadzidzisi.
Saka kuita mufudzi musoro wekereke hazvibvi mumaGwaro. Hamungapedzi nyaya yakakura kudai nevhesi rimwechete iri.
Hakuna Gwaro rinotaura kuti mufudzi (shepherd) ndiye mufudzi (pasita).
Saka kusimudzira munhu wenyama semutungamiriri pamusoro pekereke haisi nzira yataifanirwa kufamba nayo isu maKristu.
I VAKORINTE 12:28 Mwari wakaisa vamwe pakereke, pakutanga vaapositora, rwechipiri vaporofita, rwechitatu vadzidzisi, tevere vaiti vamabasa esimba, teere zvipo zvekuporesa, navabatsiri navabati namarudzi mazhinji endimi.
Tarirai, Mwari paakaita kereke, hapana kubvira pataurwa mufudzi kana mufundisi (pasita).
Saka kuwana vafudzi vachitonga mumakereke zvinoratidza pachena kuti injere dzevanhu dziri kumisikidza kereke nhasi uno, kwete Mwari. Kana Pope ari musoro wekereke yeRoman Catholic, uye kana mufudzi ari musoro wekereke mumasangano akabuda muRoma, saka hazvishamisi kuti musoro wekereke weChokwadi, Jesu Kristu, akamira kunze kwekereke (Zvakazarurwa3) hakuna munhu angava nemisoro miviri.
ZVAKAZARURWA 17:4 Mukadzi wakanga akapfeka nguvo tsvuku neshava, akashonga ndarama nemabwe anokosha, namaparera, nomuruvoko rwake makange muinomudziyo wendarama uzere nezvinonyangadza netsvina yovupombwe hwake.
Kereke yeRoman Cathoic ndiyo kereke yakapfumisisa pasi rese. Asi Mwari haafadzwi nezvaari kupa mumudziyo wake wendarama. Kunze anoratidzika zvinoyemurika. Mukati zvinonyangadza uye itsvina yehupombwe hwake.
Nguvo yemakadhinari ine nguwani tsvuku nenguvo shava.
MaKadhinari anoita kanzuru yepamusoro-soro inofambisa zvinhu mukereke yeRoman Cathoic.
Mari yesimbi ichiratidza mambo weRoma yechipegani tiberius, akatonga kubva muna 14- 37 AD, saMaxim (um) Pontiff. Pontiff wepamusoro-soro kana kuti mupurisiti mukuru wezvakavanzika zveBabironi yechiPegani. Ndiye aive mambo pakarovererwa Jesu.
Pope Leo 12 muna 1825 akatora mhenduru yemukadzi iyi, inomiririra kereke yeRoman Catholic, agere panyika.
Mazwi aripo anoti “Agere pamusoro penyika yese” kana kuti “nyika yese ndicho chigaro chake”.
MaPope anotenda kuti kereke yeCatholic inofanira kutonga pasi rese. Ndicho chinangwa chechipope chiri kushingirirwa parizvono.
Tarirai mabatiro aakaita komichi kana kuti mudziyo wake wedzidziso dzechitendero. Pope anotenda kuti unofanira kuzviwisira kukereke yeRoman Catholic kuti uponeswe. Izvi zvakataurwa naPope Boniface 8 muna 1302.
Iri pamusoro apa imari yesimbi inodaidzwa kuti Lire raPope Paul 6 - Pont (fex) Max (imus) (mupurisiti mukuru wezvakavanzika zveBabironi)- muguta reVatican 1963.
Saka Pope aive atora chinzimbo chekuva Pontiff kana kuti mupurisiti mukuru wezvakavanzika zveBabironi kubva kumadzimambo eRoma yechipegani.
Fides zvinoreva kuti kutenda (faith). Mukadzi anomiririra kereke yeCatholic yakatendeka kuna Pope nezvaanotenda. Akabata mudziyo muruvoko rwake zvinoratidza kutenda kwake kana kuti dzidziso yaanotambanudzira kunyika kuitira kuti aponese nyika.
Saka Johane anoona kereke yeRoman Catholic semukadzi akabata mudziyo unomiririra dzidziso yekereke.
ZVAKAZARURWA 17:5 Pahuma pake pakanga pakanyorwa zita rakavanzika iri: BABIRONI GUTA GURU, MAI VEMHOMBWE NAVEZVINONYANGADZA ZVENYIKA.
Kereke yeLateran pachikomo cheCaelian kuRoma (chimwe chezvikomo zvinomwe zvekutanga) ndiyo kereke yakurisa kumadokero. Ndokusaka ichizvidaidza kuti mai vemakereke. Vemasangano vakazvibvisa kubva kukereke yeCatholic panguva yaive yava pamberi zvakanyanya saka vanokwanisa kutaurwa vachinzi makereke vanasikana vaamai vemakereke Cathoic. Luther aive mumonk wechiCatholic kusvikira paakazobudawo mukereke yeCatholic paakatukwa naPope.
Mufananidzo unotevera wakaitwa mukereke yepaLateran (kana kuti Basilica).
Kuturikirwa kwakaringana kunoti “Kereke yeLateran yakayera muguta rese nepasi rese, amai uye musoro wekereke”.
Saka kereke yeLateran inozviti mai vemakereke. Isu vemasangano takazouya pave paya, kunyangwe vemasangano vakaberekwa vari vanasikana mhandara pasi pevamutsiridzi vekutanga, hatina kuzorarama takadaro nekufamba kwakazoita nguva. Kuti tivake masangano edu (mazwi asiri mumaGwaro) takatevera muenzaniso weCatholic tikatambira kubata kwehutungamiriri hwevanhu, saka Jesu akanga asisiri Musoro wedu. Kutenda kwatakaita mumazwi akabatwa uye mafungiro evanhu vakasiyana siyana pachinzvimbo chekungotevera Bhaibheri. Saka nekudaro hatichina kuvimbika kumurume wedu, Shoko. Mwari haafari nesu tese pachokwadi. MaCatholic neveMasangano pamwechete, nekuti murairo wake kumakereke ese mumwechete.
Babironi yekare yaive chiumbwa chekutadza zvakavanzika izvozvo zvese zvakabva zvaziviswa kuvanhu, nevanhu vanodaidzwa kuti maKadhinari. “Cardo” zvinoreva kuti hinji. MaKadhinari aya aidzora kuvhurika nekuvharika kwemusuwo waienda kukamuri yaive yakachengeterwa zvakavanzika. Kana wairipira zvakakwana, ukareurura zvivi zvako zvese zvakakwana kwavari zvekuti vaizokwanisa kushandisa izvozvo kana waenda, uye chero uchiri kutenda mazviri, vaizozarura musuwo pamahinji pawo zviri nani zvekuti waikwanisa kuzoona zvakavanzika zvaive kuseri kwemusuwo.
Mukati menguva dzese dzemakereke maPope vaiti Petro aive nemakiyi emusuwo uye aizorega vanhu vachipinda denga kana vakateerera Pope. Dzidziso iyi “yeUnam Sanctam” yakatangwa muna 1302 AD uye zvinoreva kuti hakuna ruponeso kunze kwekereke yeCatholic. Tarisai kuti ruponeso harusi kubva kuna Jesu chete sei, asi rwave zvakare mumaoko aPetro anofanira kutivhurira musuwo. Munofunga kuti Mwari anofadzwa nazvo here izvi.
ZVAKAZARURWA 17:6 Ipaapo ndakavona mukadzi akabatwa neropa ravatsvene, vuye neropa rezvapupu zvaJesu; ndikati ndichimuvona, ndikashamiswa nokushamiswa kukuru.
Madzimambo eRoma, kubva pana Nero muna 64 AD apo paakatanga kuuraya maKristu, kusvika kuna 312 AD apo Constantine paakava mambo akamisa kuuraiwa kwemaKristu, vakauraisa maKristu aisvika 3 miriyoni.
Kunana 400 AD, Augustine, muparidzi wechiCatholic aive nesimba, akati zvaive zvakanaka kuuraya maKristu vaisatenderana nekereke yeCatholic. Vamwe venhorondo vakamupa zita rekuti muchinda wevaurayi. Makore akapoteredza 450 AD, Leo I, bhishopu weRoman Catholic akaturikira dzidziso dzaAugustine achiti dzaireva kuti maCatholic aikwanisa kuuraya maKristu aibuda muRoma. Aifara apo vainzvera maGwaro vaiuraiwa kuSpain Leo I akaedza kupasisa kuti Bhishopu weRoma ndiye aive mutungamiriri wechiKristu. Saka muchina wekuuraya wakaitwa kuti utange basa wakatsvaira kupfuura mukati meNguva yeRima kusvika munguva yakatevera yeMutsiridzo apo kereke yeCatholic yakauraya vanhu vaisvika 68 miriyoni maKristu nevamwe vaisatenda muchiCatholic. Rumutsiridzo rwaitevera rwaive nekurwisana kukuru urwo rwakamisa kupararira kwemutsiridzo kuti rusasvike munyika zhinji.
Tisingataure maJuda nemaMosiremu nevamwe vagari vakauraiwa mumaKurusedhi aikurudzirwa naPope Urban II. Kuuraya vanhu vaisatenda kwaizokwanisa kupa vaiita makurusedhi aya nzvimbo kudenga, ndizvo zvaaitaura. Uku kwaive kutadza pakutadzisisa - “Kuti ndinokwanisa kuenda kudenga kana ndikakuuraya”. Vanhu havangaenda pakaderera kusvika ipapo.
Kubatwa neropa. Huwandu hwevanhu vakauraiwa ava hwaive hwakawandisa. Paiva pasina chikonzero chekuti ropa rese rakadeuka iri rideurwe.
Asi vanasikana veMasangano vaive vakatosvibiswawo nerudo rweropa urwu. VeMasangano vakaurayawo maCatholic, vamwe veMasangano vakaurayana pachavo nevavaisatenderana navo. VeAnaaaptist vaibhabhatidzana nenzira yekunyikana mumvura vakapera kunyudzwawo nevamwe veMasangano. Saka muenzaniso wekuurayana muchiKristu wakapararira kubva kumaCatholic kuenda kune veMasangano. Joseph Smith wemaMormon akapfurwa nemaMethodist kuAmerica. VeMasangano vakauraya vanhu vashoma pane vakauraiwa nemuchina wekuuraya wakaitwa nemaPope neguta reVatican, asi chero veMasangano vakaita kuuraya kushoma, kuuraya kumwe nekumwe kwavakaita kwaive kwakaipa. WeMasangano, mambokadzi Elizabeth akati, ndakatendera vanhu vanosvika 1 miriyoni nehafu vekuCatholic yechi Irish kuti vauraiwe.
John Calvin, mumutsiridzi mukuru, akataura chapupu chake paakapisa Servetus mumoto, uyo aitenda muna Mwari umwechete pachinzvimbo cheTiriniti. Kushaiwa tsitsi kwemunhu pamusoro peumwe munhu kunotyisa.
Saka isu veMasangano hatina mbiri yakanakawo.
Asi Johane akashamiswa nekushamiswa kukuru. Zvivakwa zvemuVatican zvakanaka zvakadii. Sirin'i yechivakwa chemba yekunamatira yeSistine yaive yakapendwa naMichelangero, munhu anoita nezve ati mukuru pasi rese. Zvaiyevedza sei uye zviri neruvara rwakanakawo sei zvakaitwa nepfuma nemabasa evatungamiri vavo nezvinzvimbo zvavo. Kurudziro yake yakapararira zvakadii pakati pevanhu pasi pano nevatungamiriri vavo. Amai Theresa, sisita ane mbiri wechiCatholic, akaita muenzaniso wekuzvipira kuchengeta vairwara nekubatsira vaitambura muCalcutta zvakafadza pasi rese. Akapa varombo mamiriyoni aakapiwa semubairo pamakwikwi eNobel. Vashoma kwazvo vakamboita muenzaniso wakadai werudo kuruzhinji.
Mafambiro ezvinhu muCatholic akaisvonaka. Saka Johane akashamiswa kuti humhondi hwese uhwu hwakaitika sei. Vanoti Pope wavo wekutanga ndi St Petro. Asi Petro paakaona Judasi achitengesa Jesu, Petro akarwisa mumwe wemaprista makuru nemunondo asi Jesu akamuudza kuti asiye munondo wake. Saka sei kereke inozviti inotevera Petro yaishandisa munondo kuuraya mamiriyoni emamwe maKristu akaita saivo, nekuda kwekuti chete havanzwanani padzidziso dzavo.
Kereke yeRoman Catholic chinhu chakavanzika uye chinoshamisa. Inoyevedza mune zvizhinji, vakaita mabasa ekupa akanaka akawanda mukusimudzira varombo. Vanobatsirawo pakupa mazano pamweya kuvazhinji. Vanobva vadzima rudo rwavo rwehufudzi nekuzvisanganisa kwavo munezvematongerwo enyika. Zvakare vari nekumwe kuita kukuru kwavanozivikanwa nako kwekurwadzisa nekuuraya.
ZVAKAZARURWA 17:7 Mutumwa akati kwandiri: washamiswa neiko? Ndichakuudza zvakavanzika zvemukadzi, nezvechikara chinomutakura, chinemisoro minomwe nenyanga dzine gumi.
Zvino Johane ave kuzowana tsananguro yezviratidzo izvi zvese.
Apa mutumwa akatanga kutsanangura pamusoro pezviratidzo kuti aive ani mukadzi mutadzi uyu, kereke inotadza iyi.
Chii chainotadza? Inotadza kutevera Bhaibheri kurarama ichiita zvakanyorwa mariri.
Chikara chine misoro minomwe chinotyisa . Kereke iyi yakatakurwa nemweya une simba kwazvo unotyisa. Sangano rezvechitendero uye zvematongerwo enyika iri reRoman Catholic riri kutsvaira nyika richiiendesa kuzuva guru rekutonga kwaMwari apo vanhu vari musangano iri vane chokwadi chekuti vari kubatira Mwari. Saka Johane akashamiswa.
Sei vanhu vese vanoratidza kururama ava vari kunyengerwa? Vose maCatholic nevanasikana vayo veMasangano.
ZVAKAZARURWA 17:8 Chikara chawavona, chaivapo, hachichipo, chodo kukwira chichibva mugomba rakadzika-dzika kundoparadzwa; vanogara panyika vasina-kunyorwa mazita avo mubhuku yohupenyu kubva pakusikwa kwenyika, vachashamiswa kana vachiona chikara, kuti chaivepo, hachichipo vuye chichazovepo.
Gomba rakadzikadzika harina nheyo dzeBhaibheri. Saka vaparidzi vane mifungo yakachenjera vanokwanisa kuita mazano matsva nefungidziro dzinobva panjere netsika dzevanhu. Vanofunga kuti hazvina basa chero vakasakoshesa kugara vachiita zviri mumaGwaro chete.
Isu maHedeni taive takambobatwa nerutava rwechipegani mukati memazuva eTestamente yekare. Jesu akauya kuzotisunungura kubva mujere remweya. Parizvino “chichechi-chechi” chiri kutidzosera mutsika dzechipegani chakavanzika. MaKristu anofara nekuita zvinhu zvinofadza nyama dzavo asi zvisina chinhu kana chirevo pamweya yavo zvisiri chikamu cheBhaibheri. SemaCathedhiro makuru, zvipfeko zvechitendero, zviratidzo zvemuchinjiko, marozari, miti yekisimusi, maisita bani, mumhanzi yemitinhimira, nekuwanana kwevarume nevarume kana vakadzi nevakadzi.
MaKristu tinoda zvinhu zvine mukurumbira zvinotiita kuti tinzwe zvakanaka kuti tipodze kusagadzikika kwekuti pamwe tiri panzvimbo yakaipa naMwari. Hatidi kuudzwa kuti tinodaro tichitadza mukutenda kwedu. Hatidi kuti hupenyu hwedu hwakanaka hune zvese zvaungafunge kuti uve nazvo semunhu huiswe pamuganhu nekuda kwenyaya dzedzidziso dzatinotenda.
Nhasi uno tinofunga kuti zvatinotenda hazvina basa nekuva zvichienderana nemaGwaro. Edzai kutsvaga izwi rekuti Pope, Kadhinari, naArchibhishopu muBhaibheri. Zvitendero zvechipegani zvakabuda mugomba zvikashonga mazwi echiKristu. Chimwari chinonzi Ishitar chakabuda kubva murwizi Euphrate chiri muzai chikatsotsonya. Ndiyo nheyo yeisita egi redu, ndine urombo, Ishita egi.
“Chaivapo, hachichipo, chichazovapo”.
Izvi zvinomiririra kutsiviwa kwemaPope. Kereke ndiyo inofambisa mweya ine simba uye yakaipisisa iyi. Pope ndiye mambo uye musoro wekereke yeCatholic. Nekufamba kwenguva, vanoramba vachisarudza Pope aive mutongi mumashure mechinguva anonzi haachiri, anenge afa. Munhu anofa asi basa raPope harifi nekuti Pope mutsva anobva asarudzwa nekanzuru yemaKadhinari. Zvisinei nekufa kwaPope wenguva iyoyo, kunogara kuine mumwe munhu achatora chinzvimbo chake.
Saka chipope chinorarama nekuda kwekuva nekanzuru yemaKadhinari inozosarudza Pope mutsva. Nzira iyi yaburitsa mutsetse wakarebesa usina kubvira wakwanisa kugurwa wevatongi munyika dzekumadokero. (Zvakadaro nekumabvirazuva zvakare, asi handina nhorondo yemutsetse wehutongi hwacho hwakararama kwenguva refu ikoko).
Pope ndiye musoro wesangano rezvechitendero iri. “chikara chaivepo” (Pope akatonga mushure mekusarudzwa nemaKadhinari), “hachichipo” (Pope anenge afa), “uye chichazovapo”, (Pope mutsva asarudzwa kuti atore chigaro chake).
Kutsiviwa kwana Pope kunobva pakutaura kwavo kuti vanoti vakabva pana Petro aive Bhishopu wekutanga weRoma. Chimiro ichi chinoyevedza. Hakuna chimwe chimiro chakamboita simba rekurarama seizvi. Vanhu vanoshamiswa nekuenderera mberi nekushingirira kwakaita chimiro ichi zvisinei neshanduko dziri panyika.
Asi Petro haana kubvira asvika kuRoma. Hakuna gwaro munezvenhorondo rinotaura izvi. Petro aie mupositora kuvaJuda. Akaenda kuBabironi kumaJuda asina kudzoka paakasunungurwa naSyrus kubva muhutapwa hwekuBabironi. MaCatholic anoshuwira kwazvo kudaidza Roma kuti Babironi kuti vagotaura kuti Petro aive kuRoma. Hachisi chokwadi ichocho. Roma haisi Babironi. Mukadzi, kereke yeRoman Catholic, yakanyorwa kunzi Babironi yakavanzika pahuma payo. Saka kereke yeRoma, mupfugwa dzayo, inotenda mune zvakavanzika zveBabironi. Ndicho chikonzero nei Mwari vachiituka. Asi Babironi iguta riri paEuphrate. Ndiko kwaive naPetro.
Bhishopu Siricius, akafa muna 399 AD, ndiye aive bhishopu weRoma wekutanga kuzvidaidza kuti Pope. Saka chi “Pope” chakatora makore anoda kusvika 400 kuti chivakike. Zano iroro havana kuriwana muBhaibheri. Pfungwa yekuti Bhishopu anotarira guta haina kubvira yakura kusvikira pakazofa mupositora Johane, zvakaitika makore akapoteredza 100 AD. Pakati pa 60 na 70 AD vakawanda vemapositora gumi nevaviri vekutanga vakauraiwa. Vamwe vakaenda kure nekure, saTomasi akaenda kuIndia. Kubva ipapo vese vekumadokero vakatanga kutarisira kuna Johane kuti avatungamirire kusvikira paakafa.
Chikara ndiwo mweya une simba apo vanhu vanoda kunamata nekusimudzira vamwe vanhu vane mbiri. Zvino munhu mumwe nemumwe anenge asimudzirwa anenge ave kuda kuti vanhu vese vazviwisire kumifungo nemazano ake emutungamiriri. Motto inoshandiswa nevatungamiriri vakawanda ndeyekuti “munhu wese ari pasi pemazano angu”.
Vatungamiriri, vese vezvematongerwo enyika nezvechitendero, vanoti kana vava pamasimba zvinovanetsa kuti vabve paari. Nhasi uno kereke rava bhizimisi guru chairo.
Pope ndiye musoro wemweya uyu wavaka sangano rekereke yepasi rese yakakurisa kwazvo (mamwe mazwi asiri mumaGwaro).
ZVAKAZARURWA 17:9 Ndipo pane kufunga kune njere. Misoro minomwe ndiwo makomo manomwe, anogarwa nomukadzi.
Njere kwete ndimi, ndicho chipo chikuru cheMweya Mutsvene. Njere dzekuyananisa maGwaro pamwechete oshanda pamwechete nekutsanangura nhorondo yekereke, zvekuti tinobva taziva zviri kuitika uye kuti chii chakaitika nguva dzakadarika. MaGwaro haafi akarwisana. Paanoita seanorwisana, zvinongoreva kuti kunzwisisa kwedu pamusoro wenyaya iwoyo kuduku kwazvo uye kwakarasika.
I VAKORINTE 12:8 Nokuti mumwe unopiwa noMweya Shoko rovuchenjeri; mumwe shoko rokuziva noMweya iwoyu;
9 Mumwe, kutenda muMweya iwoyu; mumwe iwoyu; mumwe zvipo zvokuporesa muMweya iwoyu;
10 Mumwe, kuita mabasa esimba; mumwe, kuporofita; mumwe, kuzivisa mweya; mumwe marudzi endimi; mumwe kududzira ndimi
I VAKORINTE 12:31 Asi singairirai zvipo zvikuru. Ndinokuratidzaivo nzira yakaisvonaka inopfuvura dzose.
Shoko revuchenjeri ndiro chipo chekutanga chataurwa. Pasina vuchenjeri hatikwanisi kunzwisisa zvinoreva Bhaibheri.
Marcus Terentius Varro (116 BC – 27 BC) kuDe Lingua Latina v. 41 akanyora kuti:
“Roma iripiko izvozvi, yaimbove makomo manomwe (Septimontium), yakapihwa zita nekuda kwemakomo mazhinji aivepo, mumashure mezvo yakavharirwa mumasvingo eguta.”
Septimontium zvinoreva kuti “makomo manomwe”.
Iri pamusoro imari yesimbi kubva kumazuva amambo kana kuti Caesari Vespasian (69-79) yakaratidza guta reRoma samwari Dea-Roma agere pamakomo manomwe. Madzimambo acho nguva iyoyo aidaidzwa kuti Caesari.
PM zvinomiririra kuti Pontiffex Maximus kana kuti Pontiff.
MaRoma echipegani emazuva iwayo ainamata mwari wechikadzi ainzi Roma. Nhasi uno Maria ndiye anonamatwa nemaCatholic mazhinji. Pope John Paul II, mumwe wemaPope akaita mukurumbira, akasimudzira Maria zvakanyanya. Saka zvakavanzika zveBabironi yechipegani zvekunamata madzitateguru zvakapinda muRoma apo Julius Caesari, muRoma akaita mbiri, akatenga nzira yake nechioko muhomwe kuti akunde pasarudzo dzekuva Pontiff (kana Pontiffex Maximus) muna 63 BC. Aizoenda kuhondo ku Gaul (France yanhasi) kuitira kuti awane kupamba pfuma kuti aripire zvikwereti zvake zvaive zvakawandisa. Vamwe venhorondo vanoti akauraya vanhu vekuGaul vaisvika 1 miriyoni. Chitendero nekurwisana zvaive zvakasangana pakutsvaga kupfuma. Nzira yekushandisa kusanganisa chitendero nekurwisa ichiriko nanhasi.
Saka tinoramba tichitevera muenzaniso weRoma yechipegani. Kunamatwa kunotwa munhukadzi nemaRoma, kwakaratidzwa pamufananidzo wemari uri padenga, unotiratidza kuti zvakavanzika zveBabironi zvichiri mukereke nhasi uno. Kunamata uku kwakangobviswa pana Dea-Roma kuenda pana Maria. Ndicho chipegani chimwechete, chakashongedzwa nenguwo dzechiKristu. Chipurisiti cheBabironi chaive nemazano akachenjera achiri kutifadza kusvikira pakumatevera.
Pamari iri pamusoro, PM zvinomiririra Pontiffex Maximus, mupristi mukuru wezvakavanzika zveBabironi. Julius Caesari ndiye aive mutongi wekutanga weRoma kutora chinzvimbo ichi muna 63 BC. Madzimambo akaramba achitora chizvimbo ichi kusvika kumakore akapoteredza 376 AD pavakachisiya nekuti vakafunga kuti, semaKristu, havafaniri kuva nechinzvimbo chechipegani. Pagore 460 AD Bhishopu weRoma, Leo I, aizvidaidza kuti Pope uye Pontiffex Maximus (Pontiff).
Roma pekutanga twaive tumaruwa tunomwe twakavakwa pamusoro pemakomo manomwe panzvimbo yaishandiswa kuyambuka rwizi rweTiberi nevaiita zvekutengesa kuitira ruchengetedzo. Romulus akasarudza kuisa nzvimbo yekutorera mari yemutero, hugororo panzimbo yaifamba neruzhinji. Vaifanira kubhadhara kuti vayambuke rwizi urwu. Pakatanga kukura huwandu hwemabhanditi aRomulus, vanhu vakatanga kuvakirazve munhivi dzaive pakati pemakomo manomwe.
Kuchengetedza vanhu ava zvaive zvakanaka kuvaka masvingo akapoteredza zvikomo zvinomwe zvese.
Pese paivakwa masvingo achipoteredza zivakwa zvenzvimbo inogara vanhu vakati wandei, vanhu vaizodaidza nzvimbo iyoyo kuti guta. Saka guta iri rakatanga kuzivikanwa seguta rezvikomo zvinomwe. Asi Bhaibheri rinomati makomo manomwe. Nei? Tichatarisa izvi pamberi.
Zvino regai titarise munhu wekuRoma aizivikanwa kwazvo, Julius Caesari. Caesari akaparadza hushe hweRoma kupfurikidza kubvisa kwaakaita simba raseneta kuitira kuti atonge ari ega semunhu -mumwechete mudzvanyiriri. Apa Caesari aiumba nzira yaizosimuka nayo kereke yeRoman Catholic. MaPope aizotonga kereke sevadzvanyiriri, uye havaizopikiswa zvavatema nemaKadhinari. Caesari mumashure mekufa kwake, akava munhu wekutanga kunamatwa samwari kuRoma. Vanhu vakafunga kuti aive pachinzvimbo chamwari. Saka maPope akasimuka kuva nesimba kwazvo nekuti aiti aive Vicar yaKristu, akamiririra pachinzvimbo chaKristu.
Caesari aive muvambi mukuru wekurwisana mune zvechitendero. Masimba akanaka. MaPope, achitonga kereke yeCatholic, akauraya vanhu vaipikisa vanosvika 68 miriyoni mukati meNguva yeRima nemakore 200 enguva yakauya mumashure meNguva yeRima. Vese vaitotevera muenzaniso waCaesari.
Makore mashoma ekupedzisira ehupenyu hwaCaesari akaratidza maitiro mamwechete neimwe nzira kumakore mashoma ekupedzisira ehupenyu hwaJesu. Julius Caesari aive nemabhii anomiririra zita rake ekuti JC, zvinomuita mupikisi waJesu Kristu (Christ), aivewo nemabhii anomiririra zita rake ekuti JC. Caesari akatonga kwemakore asingadariki 4 ari mudzvanyiriri akakwana akauraiwa na Brutus aive shamwari yake vachiri vadiki. Jesu akaita hushumiri hwemakore matatu nehafu akatengeswa kusvika parufu rwake naJudhasi aive shamwari yake.
Julius Caesar – Murume akaita mhuri yekutanga “yehumambo” yemadzimambo eRoma.
Kutsiva mambo yaive yagara iri nyaya inonetsa. Vapambi vechigaro chehushe vakauraya madzimambo akawandisa.
Kereke yeRoma yakagadzirisa nyaya iyi nekutaura kuti vanomiririra Petro. Vainyepa pamusoro penhorondo vachiti Petro akauraiwa kuRoma. Hakuna humbowo munhorondo hunotsigira izvi. Petro haana kubvira asvika kuRoma.
Asi Petro ane makiyi edenga, saka maPope anoti vaive panzvimbo yaPetro, uye ivo vega ndivo vanokwanisa kutendera munhu kuti apinde denga. Uku kwaive kutaura kune simba kwakafadza vakawanda vemarudzi evatorwa aiuya kuzopamba. Vemarudzi evatorwa mazhinji vaiuya nechinangwa chekupamba vaizotendeukira kuchiCatholic.
Pekupedzisira muna 1059 AD, Pope Nicholas 2 akasarudza kuti Pope mutsva aizosarudzwa chete nemaKadhinari. Saka chinzvimbo chaPetro chakaramba chiri mumaoko eCatholic. Hakuna Pope mutsva aive asina kusarudzwa nemaKadhinari aizoonekwa semumiririri waPetro.
Asi pano pane chokwadi chakadzama. Bhaibheri rinoti makomo manomwe, kwete zvikomo zvinomwe.
Pamufananidzo waDanieri wemuHedeni, dombo rakarova tsoka dombo iroro rikakura kuita gomo rimomiririra hushe hwaMwari munguva yeMereniyamu, makore 1 000 achatonga Jesu panyika.
Kuna Mateo 13 kune mifananidzo minomwe inodaidzwa kuti Hushe hweDenga. (munokwanisa kutarisa kubva pachidzidzo chinonzi Mateo Chitsauko 13 inotsanangura Nguva dzeMakereke Manomwe) mufananidzo umwe neumwe unomiririra nguva imwechete yenguva nomwe dzemakereke. Saka nguva imwe neimwe yekereke hushe. Saka kereke yeRoman Catholic ndiyo muvengi waMwari munguva nomwe dzese dzemakereke, kana hushe kana kuti makomo. Hakuna kubvira kwaita umwe muvengi mukuru wechokwadi mukati menguva nomwe dzemakereke akavapo kwemakore 2 000 ese.
REVELATION 17:10 Ndiwo madzimambo manomwe ; vashanu vawa, mumwe uripo, mumwe ugere kusvika; kana achisvika unofanira kugara chinguva chiduku.
54-0513 CHIRATIDZO CHECHIKARA
Pane madzimambo manomwe: vashanu vawa ...
Kana tikatora nhorondo, tikaenda kumashure-shure tikairatidza, pakawa madzimambo kuRoma, kubva pahushe hweBabironi.
… mumwe wavo aive … (Nero) ... uye mumwe wavo aizouya; …
uye achagara chinguva chiduku… (mwedzi inokwana kuita mitanhatu kana asvika.)
Nero (54-68 AD) aitonga mukati menguva yaive Johane airi muhupoteri kuPatmosi. Johani akasunungurwa muna 68 AD pakafa Nero. Pamberi umwe mambo Domitian (81-96 AD) akanopotera kuPatmosi zvakare, asati azonyatsosunungurwa muna 96 AD pakafa Domitian. Johane akagamuchira zaruriro dzake huru muzvikamu zviviri. Pakusunungurwa kwake akaziva kuti Testamente Istva yaive yakwana nekuti hapana chaizoda kuwedzerwa (Zvakazarurwa 22:18). Akadzoka kuEfeso ari iye ega munhu aive akakwanira pamweya kubatanidza Testamente Itsva kubva kutsamba dzakasiyana siyana nezvinyorwa zvaivepo.
Galba, uto rekuRoma raive kuSpain, akatora chinzvimbo chamambo asi akangochibata kwemwedzi minomwe, inova “nguva duku”. Izvi zvakagumisa hutongi hwerudzi rwaJulius Caesari. Roma yechipegani yakagara iine dambudziko panyaya dzekutsiviwa kwemadzimambo.
Kereke yeCatholic yakagadzirisa dambudziko iri nekurambidza maKadhinari kuti aroore. Saka vaive vasingazotarisire kuti vana vagare chinzvimbo chaPope anenge afa. MaKadhinari aive newavaifunga kuti aive munhu akakodzera pabasa iri. Saka makore adarika vakasarudza John Paul II naFrancis semaPope aiziva, uye vaive vasina kana hukama.
Kumabvazuva vanhu vainzi vanamate mambo wavo sekuti aive mwari. Izvi zvaive zvisiri kumadokero. Alexander akabva kuGreece achienda kuPersia, nekuda kwebudiriro yake yaionekwa kwazvo akava munhu wekutanga wekumadokero kunamatwa kumabvazuva, uko mambo vainamatwa samwari nekuda kwechinyakare chavo chavaitevera. Alexander nekuda kwekuzvikudza nekuzvida, akabva atanga kumanikidza vanhu vekuMacedonia nemaGiriki kuti vamunamate zvakare, asi akabva afa pasina nguva refu atanga izvi. Asi kuita uku kwaive kwatotangwa. Munhu wekumadokero aive ave kukwanisa kunamatwa samwari.
Julius Caesari aive nebasa raive nembiri kwazvo zvekuti akabva ava muRoma akatanga kunamatwa samwari, mumashure mekufa kwake muna 44 BC, kwakavakwa temberi muzita rake muna 29 AD kuPergamo. Saka kunamata madzimambo kwakaberekwa muhushe hweRoma. Caesari paairarama aive Pontiff wezvakavanzika zveBabironi, zvaakatanga sechinzvimbo chamambo weRoma. Pope akasimuka kuva nesimba pamusoro pemarudzi evatorwa echipegani akabva aparadza hushe hweRoma nekuzvidaidza kuti Pontiff, mupurisiti wavo mukuru. MaPope aitenda uye akaparidza zvakavanzika zveBabironi zvizhinji nekuti zvaivapa simba guru kwazvo pakati pemarudzi evatorwa. Mumakore akazouya vanasikana veCatholic, veMasangano, vaizoteverawo tsoka dzamai vavo Catholic, dzekutenda mune zvimwe zvakavanzika zveBabironi.
Ezekiri akaungudzawo pamusoro pehuwori hweJerusarema nenyika dzemapegani aive akavapoteredza.
EZEKIERI 16:44 Tarirai, mumwe nemumwe anobata netsumo achabata tsumo iyi pamusoro pako, achiti: sezvakaita mai, ndizvo zvakaita mwanasikana wavo.
Pamasikirwo, mwanasikana anotodza mai vake. Kutarisa mai kunokupa muono uri nani wekuti mwanasikana wacho achava akaita sei muhupenyu hwake kana ati kurei.
Saka, zvinosuwisa, isu vanasikana veMasangano tinotevedzera kuita kwechipegani kuna mai vedu Catholic.
Mambo akatevera Caesari aive muzukuru wehanzvadzi yake Augustus. Akatora simba rese kubva kuna seneta, kunyangwe akavapa kuti vaone kunge vanoremekedzwa akaita seaivateerera mazano avo. Ipapo, nekuita kune kuzvidza, akavasiya vakadaro akatanga kutonga semunhu mumwechete mudzvanyiriri akazviti mambo. “munhu mumwechete ndiye mukuru”, ndiyo yaive motto yake.
Tiberius akava mwana waAugustus wekurera. Ndiye akatevera uye aive nehutsinye. Akaita kuita kukuru kwekushandisa huwori kuti ave nesimba zhinji. Akauraya maseneta anosvika 300 zvakaita kuti maseneta atye kumupikisa. Maseneta akamuita mwari, asi akaenderera mberi kuuraya vamwe 300 pakati pavo.
Caligula, muzukuru komana wekuwana waTiberius, akava mambo aitevera. Aifunga kuti aive mwari. Aive asina basa rekuteerera chero munhu. Munhu wese aifanira kumuteerera. Aive nehasha uye kutyiwa kukuru.
Kusvika panguva iyoyo maseneta eRoma ndiwo aikwanisa kugadza munhu kuva mambo.
Claudius, sekuru vaCaligula, vakaitwa mambo nemauto ePraetoria, ndiwo mauto ega aitenderwa muItaly. Claudius akapa mauto aya mari zhinji, saka zvakabhadhara mauto kusvikira pakumuita mambo mutsva. Akaberekwa kuGaul (France) ndiye mambo wekutanga akaberekerwa kunze kweItaly. Aive ndiye akatanga kuitwa mambo pasina sarudzo yemaseneta.
Claudius akaroora mai vaNero, akabva atora Nero kumuita mwanakomana wake. Mai vanero vakaisira Claudius muchetura kuti Nero ave mambo.
Nero akaita mambo akatanga kuuraya kwekutanga, kwemaKristu muna 64 AD achivapomera pamusoro pemoto wakapisa Roma. Aivewo nehutsinye akaita kuti vanhu vakapfuma vape iye mari yake pamawiri avo. Aiti vanenge vabvuma ovaita kuti vazviuraye kuitira kuti atore mari yavo. Akazozviuraya muna 68 AD.
Mukuru wemauto Galba, aive mukuru wemauto eRoma kuSpain, akatora chigaro cheushe nemasimba paakasarudzwa nemauto kuSpain. Kakaita kekutanga kuti mambo vasarudzwe kubva kunze kweItaly. Kwaivewo kutanga kuti munhu aive asingabvi mumhuri yehumambo asarudzwe kuva mambo. Mhuri yaCaesari yehumambo yaive yaguma.
ZVAKAZARURWA 17:11 Chikara chaivepo, chisisipo, ndiye worusere, mumwe wavanomwe, unondoparadzwa.
Mhuri yaCaesari yakatonga Roma payaive nyika yakazoparadzwa nemarudzi evatorwa. Asi maPope nekufamba kwenguva aizoita hushe hwemweya kana kuti kereke umo Pope umwe nemumwe aizova nesimba rakazara rehudzvanyiriri. Hushe hwemweya uhu, kereke yeCatholic, yakazopona kubva pakutapwa nemarudzi evatorwa ikabudirira kushandura marudzi evatorwa kuti vave maCatholic.
Marudzi evatorwa akatapa nzvimbo dzehushe hwenyika yeRoma asi kereke yeRoma yakazotapa pfungwa dzemarudzi evatorwa.
Saka Pope akabva asimuka kuva pamasimba pakati pemarudzi evatorwa.
Asi nhengo nhanhatu dzemhuri yaCaesari dzaive dzasiya matsimba aizoteverwa naPope nekufamba kwenguva.
“Ndiye wechisere, mumwe wavanomwe”.
“Ndiye” ataurwa uyu akamiririra chipope, nekuti Pope ndiye musoro wekereke yeCatholic. MaPope ndiwo muenzaniso wehutungamiriri hwararama kwenguva refu munyika dzekumadokero. MaPope akatonga, achiri kutonga, sevadzvanyiriri nemunhu mumwechete mudzvanyiriri nehutongi humwechete nehwaive nemadzimambo eRoma.
MumaGwaro, nomwe ndicho chiverengo chekuzadzisa. Mazuva manomwe anozadzisa vhiki. Ruvara rwemarudzi manomwe anotonga rwunozadzisa murarabungu, unova chiratidzo chesungano yaMwari nenyika yaakaita mumashure memvura yaNoa. Saka sere (8) kutanga kwechinhu chitsva. Madzimambo eRoma yechipegani kana kuti maCaesari aizotsiviwa nemaPope eRoma yemweya. Roma yakabatana yechipegani yedare yepamakumbo emufananidzo waDanieri wemuHedeni wakashanduka kuva zvidimbu zvidiki zvedare muRoman Catholic yechipope mutsoka dzemufananidzo. Hushe hweRoma yechipegani, hunotonga miviri yevanhu nekuvatonga zvine hutsinye hwakawa sehushe hwenyika hukatsiviwa nemaPope eRoma nehushe hwavo hwekereke yemweya inotonga njere dzevanhu.
Madzimambo manomwe eRoma ekutanga ehushe akabva kumhuri imwechete. Julius Caesari haana kubvira azvidaidza kuti mambo asi akamutsiva aive Augustus akazviti aive mambo. Chipope pavatongi vechipegani “vanomwe”. Zviri murudzi rwumwechete nemadzimambo enyika yeRoma yechipegani.
Sana Caesari, maPope aizova nesimba mukereke. MaBhishopu ekutanga haana kubvira azvidaidza kuti maPope. Chinzvimbo ichi chakazotanga kushandiswa makore epedyo negore 400 AD. Hutungamiriri hwevanhu hwakabva hwatora kereke. SanaCaesari vaizoonekwa sana Pontiff kana kuti mapirisiti makuru ezvakavanzika zveBabironi. Zvakadaro vaizozivisa dzidziso nemitambo yechipegani mukereke izvo zvaizotevedzerwa nevemasangano. Pavanomwe vekutanga, Caesari naAugustus ndivo vaive vatungamiriri vaive nani. Saka, pakati pemaPope angangosvike 260, panowanikwa mapope mashoma anokwanisa uye anokodzera akaita sa Gregory I, asi pakati ipapo paizowanikwa hunhu hwakaipawo. SaTiberius, Caligula naNero, vaive vatungamiriri vakaipa vane hutsinye.
Saka nhengo shanu dzemhuri yaCaesari dzaive dzatofa (“vashanu vawa”) mumashure mekuva vatongi vehushe hukurusa uhu mbiri yakatenderera yekupamba zvine hutsinye nekuita vanhu varanda.
Panguva yechiratidzo ichi, Nero aitonga ari mambo (“chaivapo”). Aive nehutsinye kukunda vese. Akasimbirira pakuti adaidzwe kuti “Wemweya” sezvo aifunga kuti aive mwari. Akapisa Roma akapomera maKristu.
Nhengo dzemhuri yaCaesari tanhatu dzekutanga idzi dzakaita gwara rekusimuka kwekereke yeCatholic. Munhu aive pamusoro, Bhishopu weRoma, aifanira kutonga semudzvanyiriri akazara. Haatadzi uye anofanirwa kuteverwa nemunhu wese. Saka kereke yega yega panzvimbo inofanira kutungamirirwa nemupurisiti anofanira kuva akavimbika kuna Pope.
Hutungamiriri hwevanhu ndiyo kiyi yekuvaka chitendero chemasangano.
Pope akasimudzirwa zvikuru zvekuti kana akataura pamusoro pedzidziso, rinova izwi raMwari. Anotora nzvimbo yaMwari panyika. Anodaidzwa kuti Vicar yaKristu (“pachinzvimbo chaKristu”). Vanhu vanofanira kumuteerera, sevaranda vanoteerera ishe wavo.
Nero akabva atanga nemweya wakaipisisa wekuuraya maKristu. Kuuraya vanhu 68 miriyoni vaibuda nevapikisi chiCatholic kwakaita kuti kereke yeCatholic ikwanise kuva nesimba rayo guru riri kuEurope nekuSouth America kudarika mumasenturi mazhinji nekubvisa hupikisi munzvimbo zhinji. Galba akatora humambo achibva kunze kwemhuri yehushe. Saka Pope wekupedzisira haasi kuzobva mukanzuru yemaKadhinari. Achatora rutsigiro rwemauto evadzvanyiriri gumi, achatorawo chinzvimbo chapope. Panguva iyoyo Kutambudzika kukuru kunenga kwatanga.
Saka vhesi iri rinotaura nezvekereke yeRoma yemweya ichisimuka kubva mumatongo ehushe hwenyika yeRoma yechipegani.
ZVAKAZARURWA 17:12 Nyanga dzine gumi dzawawona, ndiwo madzimambo ane gumi achigere kupiwa vushe, asi vachapiwa simba samadzimambo pamwechete nechikara nguva imwe.
Havana kugadzwa kuva madzimambo nekuti vachapiwa simba kuva samadzimambo. Tsananguro yatingawane parizvino ndeyekuti vadzvanyiriri.
Mudzvanyiriri munhu ane simba seramadzimambo, asi asina korona.
Muenzaniso watingashandise ndewemutungamiririri wekuRussia Putin. Akasarudzwa zviri pamutemo zvake asi akasimba zvekuti hakuna vanopikisa vanokwanisa kumira paari. Saka Putin ane simba rizere kuRussia, sekunge mudzvanyiriri. Muna Kukadzi 2015 Boris Nemtsov, akambodzidziswa kuti azove mutungamiriri wenyika pachake, akapfurwa asarirwa nemamita anoverengeka kuti asvike kunogadzwa. Hitler naStalin vaiziva zvese zvinoitwa kubvisa vapikisi. Ndiyo nzira yavakaita nayo hudzvanyiriri hwavo.
Putin akatanga kutonga muna 2 000 nekushandisa kambani yezvivhitivhiti kupomera vapikisi vake vaviri zvakaipisisa zvekuti vakabva vasiya vega kukwikwidza kuva vatungamiriri venyika. Paakatanga kutonga akaparadza kambani yeNTV akaitora kuiita yehurumende inoshambadza shoko pamusoro pake kuti arambe ari pakutonga. Russia inoti ine rusununguko, asi pachokwadi mapato mazhinji anotongwa neKremlin, sarudzo dzakabva dzashanduka kuva chiumbwa chekungodzosera masimba kwavari. Mutungamiriri wenyika Putin paaifanira kubva pachinzvimbo mumashure memakore masere, akazviita Prime minisita muteveri wake anomuteverera Medvedev akamira semutungamiriri wenyika kwemakore mana akabva adzosera hutungamiriri kuna Putin. Uhu hudzvanyiriri huri pasi pekurasisa kwerusununguko.
China nhasi uno iri kusimudzira dzimwe nyika mune zvehupfumi hwayo, asi iri kutongwa nenzira yehudzvanyiriri nevatungamiriri vayo, kutangira kuna Mao Tse-tung akauraya vanhu vechiChina vanosvika 77 miriyoni nenzara inokonzereswa nevanhu kwete yaMwari. Lenin naStalin, vadzvanyiriri vezvevhu kuRussia “chete” vakauraya vanhu vekuRussia 35 miriyoni. Vapambevhu vanogona kwazvo zvekuuraya.
Vadzvanyiriri vakadai gumi vachasimuka munguva inouya, munguva yeKutambudzika kukuru.
Awa rimwechete nechikara. Iyi inguva duku yeKutambudzika kukuru. Antikristu wekupedzisira, Pope achange asiri Kadhinari wechiCatholic. SaGalba mukuru wemauto, achabva kunze achanyorerana chibvumirano nevadzvanyiriri gumi vane simba kwazvo mukati menguva yeKutambudzika kukuru. Nguva yeKutambudzika kukuru ichavapo kwemakore matatu nehafu.
Vadzvanyiriri gumi ava vachabatana pasi paPope wekupedzisira mukuru. SaPope wekereke yeRoma achawana simba guru kwazvo rezvechitendero uye simba guru rezvemari.
Kuwedzera pane izvi achava nesimba guru kwazvo nekubata kwevadzvanyiriri gumi vakabatana pamwechete.
Izvi zvichamuita kuti ave munhu asingadzoreke. Simba redare reRoma yehutsinye richaburitswa pasi rese.
ZVAKAZARURWA 17:14 Ava vacharwa neGwayana, Gwayana richavakunda; nokuti iro ndiShe wemadzishe; Mambo wemadzimambo; naivo vanaro ndivanhu vakadanwa, vatsvene, vakatendeka.
Kusarurama kwenguva yeKutambudzika nezviitiko zvayo zvinokonzereswa naantikristu kuchasvitsa hondo dzake kuAmagedhoni.
Ikoko Pope waantikristu achazoona kuti haakodzeri uye haakundi.
Kana tasvika pamasimba, Jesu ndiye mukuru.
PaAmagedhoni acharatidza simba rake nekuparadza masimba ezvakaipa. Hondo iyi pachadeuka ropa zvakaomarara.
Asi Mwenga waKristu anenge ari naJesu. Vakadanwa vakasarudzwa Naye. MaKristu mazhinji anofunga kuti izvi ndezvechokwadi nekuda kwezvavanosangana nazvo muna Kristu asi zvavakatemerwa pechitatu ndizvo zvakaomarara: kuvimbika.
Ndiani pakati pemaKristu akavimbika kushoko raMwari chete. Asina kutendeka kusangano rekereke panguva yarinorwisa Bhaibheri. Asingafari netsika dzavaNikoraiti dzinotsanangura panotongwa vanhu nemunhu mumwechete apo mufundisi anosimudzirwa pamusoro pechaunga. Hakuna huchenjeri hwechipegani hwakabva kuGreece huri pamusoro pevanhu vatatu-mumumwechete kana munhu mumwe muhutatu. Hapana mazita ezvinzvimbo matatu Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene angatsive Zita raJesu Kristu. Hapanawo Tiriniti inotsiva Jesu saMwari wemasimba ose.
Kana zvakakosha zvikatariswa, panoshaikwa vazhinji vemaKristu anhasi vachiri kutevera Mwari.
ZVAKAZARURWA 17:15 Zvino akati kwandiri: Mvura yawavona, inogarwa nemhombwe ndivo vanhu, navazhinji, namarudzi, nendimi.
Vanhu vazhinji vasina kugadzikika, vese vachichemera kodzero dzavo, vachiramba mirairo pakupfeka kana hunhu vachirwisa chokwadi chemaGwaro kana kugadziriswa pavanotadza, vanomiririrwa nemvura dzegungwa dzisingazorori kuita mafungu.
ZVAKAZARURWA 17:16 Nyanga dzine gumi dzawawona, nechikara, ndivo vachavenga mhombwe, vachaiparadza, nokuitorera nguvo; vachadya nyama yayo, nekuipisa nomoto.
Pope waantikristu achada kutevedzera Mwari nekuisa chigaro chake muguta raMwari, Jerusarema. Saka achashandisa kereke yeRoma kuti ave nesimba rakakwana kuti atamire kuJerusarema. Kana guta reVatican rikange rapedza basa raro, achatendera vadzvanyiriri vehondo kuti vadonhedzere bhomba reatomi paVatican. Ndiyo nzira inoshanda naSatani. Kana uchimubatira, iye anofarawo kukushandisa. Kana usisina basa kwaari, anobva akurasa.
Stalin mudzvanyiriri weRussia ane hutsinye, aigara ainevanhu vaizvipira kuuraya vapikisi vake. Zvino, kuti anyararidze ruzivo rwavo pamusoro pemhosva yake, aizouraya mhondi dziya. Vanhu vaizvipira kumuitira humhondi ava vese vaive vasingadzidzi. Vairamba vachiuraya ivo vachiuraiwawo. Satani haasi munhu akanaka. Garirai kure kure naye nepamunogona napo.
ZVAKAZARURWA 17:17 Nokuti Mwari akaisa mumoyo yavo kurangarira kwake, vave nokurangarira kumwe, vape chikara ushe hwavo, kusvikira mashoko aMwari aitika.
Mwari anotoshandisa chero vavengi vake. Vadzvanyiriri vakaipa ava vachabatana kusvikira vaita kuparadza kukuru kwavanofanira kuti vaite. Mwari anobva avagadzirisa. Saka chero vavengi vaMwari vane kurwadziwa kwekuziva kuti mukurwisa kwavo kuda kwaMwari, vanokunda chete pakuita zvinodiwa naMwari kuti zvizadziswe.
Hitler akauraya maJuda 6 miriyoni pamaJuda 9 miriyoni vaive kuEurope nekuRussia munzvimbo dzake dzaaiuraya vanhu nemweya wegasi. Saka Hitler akaedza kubvisa maJuda zvachose. Asi pasi rese rakakatyamadzwa kwazvo nekuuraya uku zvekuti pakarepo vakanzwira maJuda tsitsi, kupfurikidza musangano wemubatanidzwa wenyika dzepasi rese (United nations) vakasarudza kuti maJuda apiwe dzimwe nzvimbo nhatu duku dzemuParestina kuti vave nemusha wavo. MaArabhu vaizotora havo dzimwe nzvimbo dzese dzemuParestina. Sarudzo dzaive pedyo chaipo. MaJuda akapotsa adyiwa nevanhu vaviri. Saka kuita kwaHitler kwakaipa kwakaita kuti maJuda azviwanire nzvimbo mumusha mavo.
MaArabhu, mumakaro neruvengo pamusoro pemaJuda vakaramba zvakabuda musarudzo idzi. Vaisada kuti maJuda vave nechero nzvimbo muParesitina. MaArabhu akaunganidza hondo shanu vakabuda kuti vanorwisa maJuda kuti abve muzvidimbu zvitatu zvenyika zvavaive vapihwa nemubatanidzwa wenyika dzepasi rese. Nenzira iyi vaifunga kuti vakauraya maJuda ese, maArabhu aizova nenyika yese yeParesitina. MaArabhu akaita saGoriathi nemauto avo aive akawandisa vakatanga kurwisa. Zvisinei, neminana, Davidi wemaJuda nehuduku hwake akavakunda, mukuita uku vakawana nzvimbo huru kwazvo yenyika yeParesitina kukunda yavaive vapiwa nemubatanidzwa wenyika dzepasi rese. Muna 1967 maArabhu akada kutanga hondo zvakare. Israeri yakatanga ndiyo kurwisa vakavatsvaira mumazuva matanhatu. Kubata kunoshamisa kwakaita kuti vakwanise kutora Jerusarema yese. Saka ruvengo nekukarira kurwa kwemaArabhu kwakavepo kungopa vaIsraeri nzvimbo yavo. Murairo wemubairo wavaive vasina kutarisira.
Asi Israiri yakakanganisa. Mumashure megore 1967 vakaramba vakabatira gwenga reSinai risiri chikamu chenyika yavo yechipikirwa. Sevakundi vakashaya hanya nezvinhu zvakakosha. Saka muna 1973 maArabhu vakavabata zvakaomarara. Israeri yakakunda asi yakarwadziswa kwazvo. Vakadzosera gwenga reSinai kuEgipita.
Chidzidzo. Vanhu vaMwari vanofanira kugara mukati memiganhu yavakatarirwa muBhaibheri. Kubuda mumiganhu iyoyo Mwari vanokupotsera kukudzosera mugwara. Chero baba vakanaka anoita izvi kuvana vavo. Mwari vane zvikonzero zvavo zvavakaisira miganhu iyoyo kubva pekutanga. Miganhu nemitemo zviriko kuitira isu uye kutichengetedza.
ZVAKAZARURWA 17:18 Mukadzi wawavona ndiro guta guru, rinobata vushe bwamadzimambo enyika.
Pano tine tsoro. Mukadzi muBhaibheri anomiririra kereke. Asi pano Bhaibheri rinoti mukadzi iguta. Tingayananise sei kutaura kuviri uku? Kune guta here rinotongwa nekereke zvekuti zita reguta iroro rinokwanisa kumiririra guta kana kereke.
Ririko ringori rimwechete. Roma.
Izwi rekuti Roma rinokwanisa kureva guta “reRoma”, kana kuti izwi rekuti Roma rinokwanisa kurevera Vatican, hedhikota yekereke yepasi rese “yeRoman”Catholic.
Haringave Constantinople kana kuti Jerusarema, kunyangwe akavakirwa pamakomo manomwe. Ndeipi kereke inotonga Constantinople? Hakuna kereke inonzi “Constantinople”. Hakuna kereke iri muConstantinople inotonga munezvematongerwo enyika pasi rese. Vakuru vedzinyika havaende kuConstantinople kana kuJerusarema kunotaura nemukuru wekereke ikoko. Ndeipi kereke inotonga Jerusarema? Hapana. Kune makereke akawandisa ikoko. Hakuna kereke imwechete inotonga.
Pakafa Pope John Paul II, kwaive nevatungamiriri vedzinyika vakawandisa parufu pake zvaive zvisati zvamboitika chero nzvimbo ipi zvayo, chero nguva ipi zvayo munhorondo.
Hushe hweRoma hune chiremerera chahwo munezvematongerwo enyika, totenda ruremekedzo nekuyemurwa kunopiwa kereke yeRoma nepasi rese.
Kereke yeRoma ine nhorondo inotosvika kumakore 2 000 ichirarama muhushe hweRoma yakazotanga kupinda mumarudzi evatorwa zvakazobereka nguva yeRima. Nyika dzeEurope dzakazosimuka nekudeura ropa kwakakura. Nhasi uno dzimwe nyika dzese dziri kusimukira dziri kutambudzika kuti dziedze kusvika kana kubatana neEurope neAmerica. Hondo dzepasi rese mbiri nehondo yaidaidzwa kuti “Cold war” dzakaitika. Hakuna aive afanoona zvese izvi, asi zvisinei kereke yeRoman Catholic yakararama ikapararira. Kereke yeRoma yakakunda zvatinoona nhasi uno.
Chii chakaita kuti izvi zviitike?
Kuvaka hushe hunogara kwenguva refu kunoda mazano anova makiyi akasarudzika anozomira senhungo.
MuBhaibheri gomo rinomiririra hushe.
DANIERI 2:34 Makaramba muchitarira kusvikira muchiona ibwe richivezwa, asi zvisingaitwi namavoko emunhu, rikarova chifananidzo patsoka dzacho dzaive dzedare nevhu, rikadziputsa-putsa.
35 Ipapo dare nevhu nendarira nesirivheri nendarama zvakaputsanyiwa pamwechete, zvikafanana nehundi iri paburiro panguvaa yezhizha; zvikatorwa nemhepo, zvikasawanirwa nzvimbo; asi ibwe, rakanga rarova chifananidzo, rakazoita gomo guru, rikazadza pasi rese.
44 Zvino namazuva amadzimambo iwayo Mwari wekudenga achamutsa ushe, usingatongozoparadzwi, uye simba rahwo haringapfuuri kunorumwe rudzi rwavanhu; asi ihwo huchaputsanya nokuparadza ushe uhwo hwose, ihwo huchamira nokusingaperi.
Tinoda njere dzemweya kuti tinzwisise chirevo chakadzama chemakomo manomwe.
Roma yakavakwa pamusoro pezvikomo zvinomwe. Saka nei tichimadaidza kuti makomo?
Izvi zvinomiririra hushe hwaivakwa naSatani kubvira kunguva yeMvura yaNoa. Hushe hwake huchazadziswa mukati menguva yeKutambudzika kukuru.
Achatora nekugara chigaro chaPope nekuti kereke yeRoman Catholic ine kubata kwenheyo nhanhatu dzakakoshera hushe hwepasi rese.
Hurumende imwechete yepasi rese, inotongwa nekereke, ichagadzwa mukati menguva yeKutambudzika.
Hushe uhwu huchavakwa pamusoro pezvinhu zvinomwe zvinokosha. Antikristu achawana nzira nhanhatu kubva kukereke uye yechinomwe, hukuru hwehondo, kubva kuvadzvanyiriri.
Kuzadzisa izvi antikristu anoda hunyengeri hwechitendero, hwezvematongerwo enyika, hutsinye nemari kuitira makaro nehuwori.
1. Tsika dzavanikoraiti (Nicolaitanism)– Kusimudzirwa kwemunhu mutsvene pamusoro pesangano kana chaunga kuti atonge sangano. Izvi zvinotungamirira kuti vanhu vasvike pakutambira munhu mutsene uyu kuti ave mudzvanyiriri pasi rese, kana ari nechipo chaicho uye achiziva zvaanoita saAlexander the Great. Pope asingatadzi anova munhu-mumwe mudzvanyiriri wekereke inofambisa mabasa ese pakutonga zvinoitirwa paVatican.
2. Ruponeso mukereke imwechete, ina Pope semumiririri waPetro nekuti vanotenda kuti Petro ega ndiye ane makiyi anozarura masuwo eDenga kuvatendi.
3. Chinhu chisingarevi chinhu chaMwari weTiriniti chakakwanira kuvatendi vakawanda nekuti chinotuka ongororo zhinji, chopa vanhu chikonzero chekuva vasingateveri Bhaibheri nguva dzese. Kana izwi rekuti Tiriniti risingakwanisi kuwanikwa muBhaibheri, asi tichitenda kuti ichokwadi, ipapo ndinenge ndane mvumo yekutenda dzimwe dzidziso dzese dzisina kunyorwa muBhaibheri. Zvakachenjera, izvi zvinotibvisa paBhaibheri zvishoma nezvishoma.
4. Zvematongerwo enyika zvinobata basa guru zvakare. Kurudziro yezvematongerwo enyika inoita rutava rwekutaurirana nemadzimambo edzinyika vachazokwezvewa kuva pasi pehurumende imwechete nekuda kwezvavanokwanisa kuwana. Kubviswa nekuuraiwa kwevapikisi kupfurikidza kushandisa zviwanikwa zvenyika zvakaita semapurisa, matare edzimhosva majere kana mauto.
5. Mari zhinji. Rangarirai Judasi, aive achichengeta mari.
6. Kereke yeroma inopamba vapambi vayo. MaPope akatendeutsa marudzi evatorwa aive aparadza hushe hwenyika yeRoma. Vakaita kuti veMasangano vaive vabuda mairi vatambire dzidziso yeTiriniti nerubapatidzo rwemvura mumazita ezvinzvimbo matatu pachinzvimbo cheZita raJesu Kristu. Vapambevhu vakapamba Poland mumashure mehondo yepasi rese yechipiri, asi Pope aibva kuPoland Pope John Paul 2 akabatsira vanhu veko kuti vaparadzane neRusia.
7. Simba rakazara rehondo nekutonga kusingakwanisi kupikiswa zvachose. Izvi zvichagoneswa nevadzvanyiriri mhondi gumi.
Kana nhungo nomwe idzi dzava panzvimbo, dzichave nheyo dzine zvikamu zvinomwe dzichagonesa hushe hwaantikristu kuti hupararire pasi rese kuti ave nekutonga kwenguva duku asi kuri kwekuparadza.uva duku asi kuri kwekuparadza.